ငါသည်သင်တို့၏အာရုံကိုကျေးဇူးပြုပြီးရမလား Freddie Murphy ကအဆောက်အဦး၌တည်ရှိ၏လျှင်, အိမ်ရှေ့တံခါးမှလာပါ။ သင်၏မယားသည်သင်ဒီမှာရောက်နေသိတယ်။ Repeat, Freddie Murphy ကသင်၏မယားကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးကို exit ကျေးဇူးပြု. ... သင် busted ကြသည်! (ထုတ်လုပ်) - Djs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, Vjs, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: #70 - DJ သမား 1 ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် အမျိုးအစား: DJ သမား drop